925 Sterling sirivha Mwedzi Kuvhurika Misodzi Totem Mhete | Wholesale_Star_1
925 Sterling sirivha Mwedzi Kuvhurika Misodzi Totem Mhete
Product Code: 11603025-chena
Metal Color:chena chenapingi
925 STERLING SILVER MOONLight OPAL TEARS YEMAKARA EARRINGS
Zvaisazove zvakanaka here kana iwe uine mhete mbiri dzinobatanidza kunaka uye runako kuti huchafamba zvakanaka pamwe neanenge chero mbatya?
Inotaridzika inoshamisa munzeve dzako sezvo ichikwidziridza ako emhando dzakanaka. Iyi inoyevedza sirivhenekiti mwedzi opal misodzi totem mhete inozoshanda zvishamiso kune kutarisa kwaunoda kuzadzisa.
Uri kuenda kunotaridzika zvakajairika neiri nyore tee uye jean ?
Iwe unofarira zvimwe zvipfeko zvechikadzi nemapfekero uye shangu? Kana kuti urikuenda kumutambo wakasarudzika uko unofanirwa kupfeka gauni uye uchitsvaga mhete dzakanakisa dzinozotaridzika zvakanaka nazvo?Yakagadzirwa zvakaomeswa simbi nesimbi inopera uye yakajeka uye inoratidzika opal dombo rakagadzirwa mune teardrop ndizvo zvinopihwa nemhete idzi.
Iyo ine push-back back yekutsvaga kuti iite nyore kuti iwe upfeke pasina kunetseka kwekurasikirwa nemhete dzemhete kumashure. Iyo zvakare yakajairika uye zvikuru mune chimiro. Mhete dzakagadzirwa nesimbi yesimbi, mhando yayo imhete inodonha uye zvinhu zvacho ndeyekristaro.
Kana iwe uri mhando yemunhu anofarira kupfeka zvishongo, donhedza mhete kuti zvive izvo chaizvo saka wakamirira chii?
Ichi chigadzirwa chakanakira iwe! Aya maviri e opal misodzi totem mhete dzinouya mune maviri mavara, chena uye pink. Iyo chena nesirivhi combo yakanakira zvipfeko zve chero ruvara sezvo ivo vasina kwazvakarerekera uye vanoratidzika vakakura nechinhu chero chipi zvacho.
Iine sirivheri uye yepingi vaviri, mavara akajeka kunge matema anoenda zvakanaka nawo uye nenzira yakafanana neye pastel mavara uye esimbi shades akaita segoridhe, ndarira, rose goridhe, uye sirivheri.
Chipo chakakwana kune chero cheshamwari dzako kana chakakosha mumwe munhu kana usiri mhando yekupfeka zvishongo zvakadaro.
Ivo vane chokwadi chekuda huwandu hwepfungwa uye kushanda nesimba kwawakaunza mukuvapa iyo inoyevedza uye yakasarudzika mhete.
Mhete ndechimwe chezvinhu zvakanakisa zvekuwonesa uye kukwidziridza chimiro chechiso chako uye kuva nereiri iyo isingangotaridzika seyakanaka asiwo inopenya chivimbo uye kunaka ndihwo hunosanganisira iwo muunganidzwa.
Model Number: VES6568
Kuumbwa \_ muenzaniso: Izvo zvisina kufanira
Back Kuwana: Kusunda-musana
Mutengo wekuti: Inopfuura madhora e8
Nzvimbo Yokutanga: zhejiang China (Bara)
nguva: Anniversary Engagement Gift Party Wedding
Colour: Ratidza semufananidzo
Apex OPP Bag
Back Kuwana: mhete mhete